Venus horyaalkii 49aad hanatay - CIYAARO.COM
Home / Tennis / Venus horyaalkii 49aad hanatay	Venus horyaalkii 49aad hanatay
By Gamadiid Guurre	Updated: February 14, 2016	Tweet
Venus Williams oo 7 mar ku guuleysatay horyaalnimadda Grand Slam ayaa 6-4 6-2 kaga badisay Misaki Doi ciyaartii ugu dambeysay Taiwan Open. Williams, oo 35 sano jir ah, ayaa dhigeeda reer Japan ka qaadatay horyaalkii 49aad ee ay ku guuleysato 21-kii sano ee ay ciyaareysay Tennis-ka.
Venus oo wareegii kowaad ee Australian Open dhaafi weysay ayaa tartankaan intii uu socday wax dhibco ah qasaarin.
Martina Navratilova ayaa ah haweeneyda ugu horyaal qaadista badan adduunka taasoo heysata 167 horyaal, halka Venus walaasheed ka yar oo ah horyaalka tennis adduunka, Serena Williams, ay heysato 69 horyaal.
Related posts:Nadal oo markii 7d ku guuleystay koobkii Barcelona Spain oo shaacisay ciyaartoyda ugu qeybgalay Euro 2012 Djokovic iyo Sharapova oo soo gudbayShare/Bookmark	newTennisVenus